Faransiiska oo Rikoodh Cusub Dhigay, Kadib Markii 233 Haween ah Loo Doortay Barlamaanka | Maankaab.com
Dawladda Faransiiska, ayaa rikoodh cusub ka dhigtay dhinaca siyaasadda, kadib markii 577 xubnood ee Barlamaanka 233 ka mid ah ay haween noqdeen, iyadoo markii hore dalka rikoodhkaas haystaa ay barlamaankooda ka mid ahaan 155 xubnood oo haween ah.
Rikoodhkan cusub ayaa dalka Barlamaanka ka dhigaaya dalka 17aad haweenka ugu badan barlamaankooda ku jiro, halka markii hore Faransiisku ku jiray kaalinta 64aad. Sidoo kale, Qaarada Yurub wuxuu kaga jiraa kaalinta 6aad, isagoo dhaafay dalka Ingiriiska iyo Jarmalka sida lagu sheegay xog-ururin la soo saaray bishan June.
Warbixintu waxay bedka soo dhigtay in haweenka Faransiiska ee golayaasha qaranka kaalmaha muhiimka kaga jiraa ay kor u soo kaceen marka laga soo bilaabo 2002, lana sadaalinaayo in ay noqon doonaan hoggaanka codaynaha kuraasta barlamaanada iyo golayaasha kale ee sharci-dejinta.
“Markii ugu horraysay waxa aad ugu soo baxay xisbiyada qaranka da’ yarta, laakiin wax aka dhashay taariikh aad u sarraysa oo ah in haweenku golaha ugu sarreeya Faransiiska kuraas aad u badan ka heleen,” ayey tidhi Catherine Barbaroux oo ah Ku-simaha hoggaanka xisbiga talada haya.